🖼️ Matxafyada & Bandhigyada | Booqo Hultsfred
Dhamaan xeerarka farshaxanka!
Markaad rabto inaad waxbadan ogaato, booqashada mid kamid ah matxafyadayada ama bandhigyadeennu waxay wali ahaan kartaa xiisahaaga. Had iyo jeer waxaa jira wax cusub oo la barto!
Matxafku waa matxaf nool. Matxafku waa nuqul ka mid ah warshad alaabta guryaha laga soo bilaabo 1920-maadkii. Mashiinnadii hore waxaa lagu kaxeeyaa wadista suunka iyo khadadka dhaadheer ee saqafka sare ayaa la wadaa
Laga soo bilaabo taariikhda si toos ah mustaqbalka. Waxaad fahamsan tahay in horumarku uu dhakhso yahay, ugu yaraan marka aad raacdo horumarka taleefanka gacanta laga bilaabo 1950-meeyadii illaa kuweenna
In ka badan nus milyan walxood oo la xidhiidha muusiga caanka ah ee Iswidhishka. Halkan waxa aad ka heli doontaa cajalado, boodhadhyo, cajalado muuqaal ah, buugaag, waxyaabo xiiso leh - iyo dharka asalka ah ee Kurt Olsson! Kaydka Dhagaxyada ee Sweden
Kaarburetor, bistoolado iyo bistoonada ilaa inta ay ishu arki karto! Matxafka baabuurta ee Målilla, waxaa jira in ka badan 100 matoor oo kala duwan iyo baaskiil wadiiqooyin si loo eego. Matoorka ugu horreeya
Bandhigga Rätt & Slätt
Bandhigga Rätt & Slätt, waxaad dareemeysaa siigada kumanaan kun oo kabo socod ah oo dul socda. Hareerahaaga fiiri oo dareemo sida baaxaddu u weynayd. Bandhig ku saabsan nolosha
Undslunds Mekaniska Verkstad
Magaalada kobaca waxay ka timid sanadihii hore ee qarnigii 1900aad. Halkan waxaa ah nuqulkii kaliya ee la yaqaan ee mashiinka Dunberg-Pettersson. Aqoon isweydaarsiga waxaa la dhisay 1905. Kadib wuxuu badalay smithy iyo aqoon isweydaarsi hore
Saddex bandhig oo ku saabsan Hultsfred sannadihii kontomeeyadii
Rune Frode timaha, Saqafka Eric Lundberg iyo guriga qoyska oo da 'yar. Lagu muujiyey Föreningshuset oo ku taal bannaanka Hultsfred. Rune Frode qolka qurxinta timaha wuxuu ku yaalay Oscarsgatan inta udhaxeysa Tors
Hultsfred muddo dheer ayaa qaabeeysay wax soo saarka guryaha. Matxafka Hultsfreds-Hus wuxuu muujinayaa moodooyin guryo ah, buugaagta guryaha, sawirro iyo sawirro. Sidoo kale waxa ka warramaya taariikhda Hultsfreds-Hus. Goorma